SPY094 - Fakantsary boaty OMG Tissue - Vahaolana OMG
SPY094 - Fakantsary boaty OMG Tissue
1080 WIFI Remote Monitoring Camera Modul
(Azo ampiasaina amin'ny iPhone / Android / Tablety / Computer)
Ity vokatra ity dia HD (1080P @ 25FPS) fakan-tsary fanaraha-maso fakantsary, miaraka amin'ny fahatsiarovan'ny karatra TF ivelany. Izy io dia vokatra avo lenta amin'ny teknolojia izay mampifanaraka ny asan'ny horonan-tsarimihetsika lahatsary, sary, alarobia, fanaraha-maso ary ny APP real time.
Ity vokatra ity dia manana kapila avo lenta;
Lahatsarim-peo avo lenta ambanin'ny lanjan'ny 5 tapitrisa;
Manohana azy io amin'ny karatra TF 32GB;
Ny asa maharitra sy ny APP, izay mahatonga azy io ho mora kokoa. Ankoatra izany, izy io dia toy ny fitaovam-piadiana manohitra ny fangalarana sy ny porofo manangona fanangonana mahery vaika.
Ny endrika ivelany sy mora entina;
Ny kapila maoderina lehibe dia afaka miasa mandritra ny ora maro;
Amin'ny endrika video miafina miafina;
Miasa amin'ny fametahana;
fanapahan-kevitra 1080P / 720P / 480P voafidy
View zoro 90 °
Toerana fanesorana fikorontanana 6 mahitsy mivantana
Fahazavana kely 1LUX
Battery fahaiza- 4000MA
Fotoana mitifitra Ambony 24 ora
Famoronana format H.264
Toerana fanoratana feo 5㎡
Power fihinanana 260MA / 3.7V
Storage mari-pana -20-80 ℃
Operating mari-pana -10-60 ℃
Karazana karatra fahatsiarovan-tena TF karatra
Karatra fahatsiarovan-tena faran'izay kely 32GB
Haka rindrambaiko VLCPlayer / SMPlayer
Rafitra fiasan'ny ordinatera Windows / Mac OS X
Fikirana finday finday Android / iOS
Web browser IE7 sy ambony, chrome, firefox safari.etc
Mpanjifa lehibe indrindra 4
Ahoana ny fametrahana WIFI?
Mijery ny horonan-tsary voavonjy ao amin'ny karatra SD amin'ny alalan'ny fampiharana finday. Mora manangana WIFI sy IP Camera.
Raha hampiasa ny fiasa P2P / WIFI dia avadiho fotsiny ny switch WIFI ao aorian'ny "on", safidio ny tamba-jotra Clocks WIFI amin'ny findainao, ary ampiasao ny fampiharana finday.
Ny fampiharana finday dia manana endri-javatra an-taonany toy ny: mampiditra horonantsary mivantana eo amin'ny findainao, maka sary, mihaino live video, mijery horonan-tsary izay voavonjy ao amin'ny karatra SD, manitsy ny fahazavana / mifanohitra, mametra ny fenitry ny fitiliana, mikaroka ny horonantsary sns. .
Raha vantany vao mifandray amin'ny router ny fakantsary, amin'ny alàlan'ny fananganana WIFI, midira ny lahatsarinao avy any amin'ny toerana misy anao LTE / 3G ao amin'ny fitaovana findainao.
Tonga ihany koa miaraka amin'ny programa iray hijerena lahatsary avy amin'ny solosaina windows rehetra.